अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध सुध्रिएला ? – Everest Times News
अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध सुध्रिएला ?
२०७७ माघ २५, आईतवार २१:०८
न्युयोर्क । चिनियाँ वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच फोन वार्ता पछि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ, के दुई आर्थिक महाशक्तिबीचको सम्बन्धमा सुधार होला?
शनिबार भएको फोन बार्ताको बिस्तृत बाहिर नआएपनि सकरात्मक संकेतहरु आएको छ
चिनियाँ वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ याङ जियची र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनबीच शनिबार फोनमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।
सो फोनका क्रममा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका साथै दुई देशको आपसी हितका बारेमा विभिन्न कुराकानी भएको बताइएको छ । यतिखेर चीनको अमेरिकासँगको सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण स्थानमा उभिएको छ र आगामी दिनमा पनि यी दुई देशबीचमा महत्वपूर्ण सम्बन्ध अघि बढ्ने चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बताएका छन् ।
चीनले चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पारस्पिारिक हित र सम्मानका साथ हुनुपर्ने भन्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सम्बन्ध चाहेको जानकारी गराएको चिनियाँ कूटनीतिज्ञ जियचीले जानकारी दिए । उनले चीन अमेरिकासँगको सम्बन्ध सधैँ एकनासको र आपसी सम्मानका आधारमा कायम गर्न चाहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै एकनासको सम्बन्धका पक्षमा चीन रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।
यस वार्ताका क्रममा उता अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले पनि अमेरिका र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध यी दुई दशेका लागि मात्र होइन कि विश्वका अरु पनि कैयौँ देश एवं विश्वका लागि नै महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्खेका थिए । उनले अमेरिका चीनसँग स्थायी र रचनात्मक रुपमा सम्बन्ध राख्न चाहेको र आगामी दिनहरुमा पनि अमेरिकाले चीनसँग कैयौँ मुद्दामा सँगै मिलेर अघि बढ्ने पनि बताएको पनि सो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।